စက်လှေခါး မတော်တဆမှု | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » စက်လှေခါး မတော်တဆမှု
Posted by Zaw Wonna on Jul 7, 2011 in News, World News | 11 comments
တရုပ်နိုင်ငံရှိ မြေအောက်ဘူတာရုံ တစ်ခုတွင် လူပေါင်းများစွာ စီးနင်း လိုက်ပါလျက်ရှိသော စက်လှေခါးတစ်ခုသည် အထက်သို့ တက်နေရာမှ ရုတ်တရက် အဆင်းဘက်သို့ ဘက်ပြောင်း လည်ပတ်သဖြင့် အသက် ၁၃နှစ်အရွယ် ယောက်ျားလေးတစ်ဦး သေဆုံးပြီး လူပေါင်း ၃၀ ခန့် ထိခိုက်ဒါဏ်ရာများ ရရှိခဲ့သည်။
၅.၇.၂၀၁၁ နေ့ နံနက် ၉ နာရီခွဲခန့်၌ ဘေဂျင်း တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ် ဘူတာရုံတွင် ဖြစ်ပွားသော အဆိုပါ မတော်တဆမှုကြောင့် လူ ၃ ဦးမှာ ပြင်းထန်သော ဒါဏ်ရာများ ရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
စက်လှေခါးမှ ရှေးဦးစွာ ကျယ်လောင်သော အသံမြည်ပြီးနောက် အထက်သို့ တက်နေရာမှ အောက်ဘက်သို့ ပြန်ဆင်းသွားပြီးနောက် လူပေါင်းများစွာ လုံးထွေး ပြုတ်ကျသွားခဲ့ကြသည်။ အစပိုင်းတွင် ထိုလူများထံမှ အော်ဟစ် အကူအညီတောင်းခံသံများ ကြားရပြီးနောက်ပိုင်း စက်လှေခါးမှာ အလွန်လျင်မြန်သောနှုန်းဖြင့် အဆင်းဘက်သို့ လည်ပတ်သွားခဲ့သည်။
အဆိုပါ စက်လှေခါးများကို ၁၅ ရက် တခါ စစ်ဆေးလေ့ ရှိကြောင်း တာဝန်ရှိသူ၏ အဆိုအရ သိရပါသည်။
Source and photos: China Daily
ဓာတ်ပုံက ဖြစ်ဖြစ်ချင်းရိုက်ထားတာနဲ့ တူတယ်နော်၊ အဲဒါမျိုးရှားတယ်။
တခါတုန်းကတွေ့ဖူးတယ်။ Weatern Park Royal မင်္ဂလာဆောင် မှာ။ မင်္ဂလာဆောင်ပြီးပြန်တော့ သတို့သား သတို့သမီးက စက်လှေခါး အဆင်းဝမှာ နှုတ်ဆက်တယ် ။ ရှေ့ကလူက နှုတ်ဆက်လို့မပြီး နောက်ကစက်လှေခါးက တောက်လျှောက်ဆင်းလာတော့ ကံကောင်းလို့ လူပိတော့မလို့ ဖြစ်နေချိန်မှာ လူတယောက်က ရှေ့ကနှုတ်ဆက်နေတဲ့လူကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး တွန်းလိုက်တယ်။ ရှေ့ကလူကဒေါသထွက်ပြီး
… ဟေ့လူ ဒီမှာနှုတ်ဆက်နေတယ်ဗျာ့…တဲ့။
… မြန်မြန်လုပ် ဒီမှာလူပိတော့မယ်…
လို့ ပြောတော့မှ ရှေ့ကလူလည်းသဘောပေါက်သွား ပြီး မြန်မြန်ထွက်သွားတာနဲ့ပြီးသွားတယ်။
သူတို့ဆီမှာတော့ ဖြစ်ဖြစ်ချင်းလည်း ဓာတ်ပုံရိုက်ခွင့်ရတာ အတော်ကို ကောင်းတာပဲနော်။ အခြေအနေတွေလည်း အကုန်သိရတယ်။ အန္တရာယ်များလိုက်တာနော်။
ဘာလို့ နောက်ပြန်လည်တာလဲ.. စက်ဆရာ လက်ဆော့လို့လား.. ဒါမှ မဟုတ် ဘာများလဲ..
စက်ချို့ ယွင်းမှူဆိုပေမဲ့ …. သေတဲ့လူကတော့ သေပြီး ၊ ဒဏ်ရာရတဲ့လူက ရသွားပြီ ။
is from is air ginger !
ရိုးရိုးလှေကားကတော့ ပိုပင်ပန်းပေမယ့် အန္တရာယ်ကင်းတယ်ပေ့ါ